Sọftụwia na mmemme - Ikkaro
Ka anyị kwuo maka sọftụwia. Otu esi eme ihe na otu esi edozi nsogbu. Nsogbu na Windows, na Linux. Gimp nkuzi na ngwaọrụ ndị ọzọ dị ka igwe arụmọrụ, wdg, wdg.
Anyị na-eji sistemụ arụmọrụ na mmemme kwa ụbọchị. Ọtụtụ oge nsogbu na-ebilite na anyị amaghị otu esi edozi ya na oge ndị ọzọ anyị na-ewepụta ha n'onwe anyị site na ịmeghị ihe n'ụzọ ziri ezi.
O doro anya na ị na-eji kọmputa arụ ọrụ gị, ị na-enweta arụmọrụ kwesịrị ekwesị? Have nwere usoro kachasị ma ọ bụ ị nwere ike ịmepụta ọzọ karịa? N’ezie enwere ngwaọrụ ndị na-enye gị ohere ịbawanye arụpụta, ma ọ bụ mgbanwe ụfọdụ na ha ma ọ bụ otu ị si ejikwa ya.
Ọfọn, anyị ga-ahụ aghụghọ na nkuzi maka ụdị ihe a niile.
Esi dezie ihe oyiyi na ogbe ma ọ bụ ogbe (na nnukwu) na Gimp
Jiri Gimp dị ka onye nchịkọta foto na ihe oyiyi. M emetụbeghị Photoshop n'ime afọ ole na ole. Ọbụna mgbe m na-eji Windows, akwụsịrị m iji Photoshop n'ihi na achọghị m mbanye anataghị ikike ya.
E nwere ụzọ dị iche iche iji gbanwee onyonyo n'ọtụtụ, n'ọtụtụ, na ogbe ma ọ bụ nnukwu, ihe ọ bụla anyị chọrọ ịkpọ ya. Mana ndọtị Gimp a dị m ezigbo mkpa. Na-enye anyị ohere ọnụ ọgụgụ ihe oyiyi, tinye akara mmiri, gbanwee ha, gbanwee usoro ahụ, belata ibu na ọtụtụ omume ndị ọzọ anyị ga-eme n'ụzọ dị ukwuu na n’oge dị mkpirikpi. Will gaghị ekwenye n’obere oge ị ga - echekwa.
M na-ejikarị ya dezie ihe oyiyi nke isiokwu blog. M tụrụ ha nke ọma, tinye akara mmiri ahụ, ma belata ibu na sekọnd. Mana ahụrụ m ọ baara ọtụtụ ndị uru na mgbakwunye na Webmasters, ndị na-ese foto chọrọ itinye akara mmiri. Ma ọ bụ ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbanwe nha ọtụtụ foto ma ọ bụ onyonyo n'otu oge
M ga-ahapụrụ gị mbụ ihe ọ na-eme na otu esi etinye ya ma ọ bụrụ na ị nwere mmasị.